ဒူဒူကြီး: January 2013
Electronic Chart Display and Information System ကြောင့် စစ်သဘေ်ာသောင်တင်ခြင်း
'တိုးအေး' သဘေ်ာမောင်းနှင်တဲ့ ရေယာဉ်မှူး (ဆလင်/ တက်မကိုင်) လည်း၊ ရန်ကုန်မြစ်ထဲမှာ တက်မ wheel ကို၊ လက်နဲ့လှည့် မောင်းရင်း collision ဖြစ်ကာ၊ သဘေ်ာတိုက်ခဲ့ဖူးသလို၊ ဆူးလူးပင်လယ်လို အပြောကျယ်တဲ့ ဗွေပင်လယ်မှာ၊ အီလက်ထရောနစ်စက်ပစ္စည်းတွေ၊ အကူအညီနဲ့ မောင်းရင်း grounding ဖြစ်ကာ၊ သောင်တင်တတ်တာကိုလည်း၊ တောက်တိုမယ်ရ၊ ကြားဖူးနားဝ အနေနဲ့ ရေးပါဦးမယ်။
Fig. Yangon River (Rangoon River) and Approaches, Admiralty Charts No. 0833
သဘေ်ာတွေ၊ တနေရာနဲ့ တနေရာကို သွားလာခုတ်မောင်းတဲ့အခါ၊ ရေပုံ ဆိုတဲ့ nautical charts တွေကို၊ အသုံးပြုရပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံးမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ nautical charts တွေဟာ၊ United Kingdom Hydrographic Office ဆိုတဲ့ ဗြိတိသျှဘုရင်မကြီးရဲ့ ဇလဗေဒဆိုင်ရာတိုင်းတာရေးရုံးမှ၊ ထုတ်ဝေတာ ဖြစ်သလို၊ Admiralty Charts တွေလို့ ခေါါပါတယ်။ မူပိုင်ခွင့် copy right အနေနဲ့ ဗြိတိသျှဓနသဟာယ common wealth နိုင်ငံတွေ အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အတွက်၊ 'crown copyright' ရယ်လို့၊ အမှတ်အသား ပြုထားပါတယ်။ ရေပုံစာရွက် mapping အနေနဲ့ အရည်အတွက် (၃၀၀၀) ကျော်တဲ့ nautical charts တွေကို၊ large-scale charts, medium-scale charts နဲ့ small-scale charts ဆိုပြီး ခွဲခြား အသုံးပြုကြပါတယ်။ large-scale charts တွေကို၊ entrances to harbours ဆိုတဲ့ ဆိပ်ကမ်းအဝင် အထွက်၊ မောင်းနှင်ခြင်းကိစ္စတွေမှာ အသုံးပြုကာ၊ medium-scale charts တွေကို coastal areas ဆိုတဲ့၊ ကမ်းခြေ အနီးအနား မောင်းနှင်ခြင်းကိစ္စတွေမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ small-scale charts တွေကိုတော့ open areas ဆိုတဲ့၊ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာအတွင်း၊ မောင်းနှင်ခြင်းကိစ္စတွေမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။
'ဒူဒူ' တို့လို ဗုစုခရုတွေကတော့ ရေပုံစာရွက် chart paper mappings တွေဟာ၊ စာရွက်အသား ကောင်းသမို့၊ ခပ်ပါးပါး gasket paper အနေနဲ့ အလိုရှိသလို၊ စက်ခန်းမှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။
ဇလဗေဒ hydrology ဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေဟာ၊ အချိန်နဲ့ အမျှပြောင်းလဲနေပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းပြည်တွေရဲ့ ရေကြောင်းဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေမှ အချိန်နဲ့ တပြေးးညီ updated ပေးပို့တဲ့ သတင်း၊ အချက်အလက်တွေအပေါါ မူတည်ပြီး၊ United Kingdom Hydrographic Office ဟာ၊ ရေပုံတွေမှာ ဖြည့်စွက် ပြင်ဆင်မှု amended ကိစ္စတွေကို၊ ဆောင်ရွက်ရသလို၊ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းပြည်တွေရဲ့ ရေကြောင်းဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်း၊ mariners' notice အနေနဲ့ ပြန်လည် သတင်းပေးပို့ရပါတယ်။ ရေကြောင်းဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ၊ သဘေ်ာလိုင်းတွေသို့ ၊ mariners' notice တွေကို ဆက်လက်ပေးပို့ပြီး၊ သဘေ်ာမှ ရေပုံစာရွက် ပြင်ဆင်ခြင်း chart correction အားဆောင်ရွက်ရပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ ရေပုံစာရွက် chart papers တွေအစား၊ Electronic Chart Display and Information System ဆိုတဲ့ ECDIS စနစ်တွေကို၊ သဘေ်ာတွေမှာ တတ်ဆင် အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ ECDIS စနစ်ဟာ computer-based navigation information system ဖြစ်ပြီး၊၊ ENC လို့ခေါါတဲ့ electronic navigational charts တနည်းအားဖြင့် DNC လို့ခေါါတဲ့ Digital Nautical Charts တွေနဲ့ radar, Navtex, automatic identification systems (AIS), Sailing Directions နဲ့ fathometer တို့မှ၊ ရရှိလာတဲ့ အချက်အလက်တွေကို၊ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုတဲ့ စနစ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။
ECDIS စနစ်ကို (၂၀၀၂) ခုနှစ်လောက်မှ၊ စတင်ပြီး SOLAS regulation V/ 19-2.1.4 အရ၊ သဘေ်ာတွေမှာ backup arrangement အနေနဲ့ အရံအဖြစ် တတ်ဆင်အသုံးပြုခဲ့ရာမှ၊ IMO Maritime Safety Committee ရဲ့ (၂၀၀၉) ခုနှစ် ဆုံးဖြတ်ချက်အရ၊ safe navigation အနေနဲ့ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ၊ သွားလာခုတ်မောင်းနိုင်စေရန်၊ မရှိမဖြတ်တတ်ဆင် အသုံးပြုရမယ့် mandatory requirement စနစ် ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ IMO Maritime Safety Committee ရဲ့ MSC. 232(82) အရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ international voyages ရေလမ်းခရီးတွေမှာ၊ သွားလာခုတ်မောင်းနေတဲ့ သဘေ်ာတိုင်းမှာ တတ်ဆင် ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Fig. USS Guardian, grounding in Sulu Sea, Tubbataha Reef, Philippine waters
USS Guardian ဆိုတဲ့ အမေရိကန်စစ်သဘေ်ာဟာ၊ Sulu Sea အတွင်းမှ Tubbataha Reef ဆိုတဲ့ သန္တာကျောက်တန်းနဲ့ ငြိပြီး၊ ဒီနှစ် ဇန္နဝါရီလ (၁၇) ရက်နေ့က၊ သောင်တင်သွားခဲ့ ပါတယ်။ ECDIS စနစ် သို့မဟုတ် DNC လို့ခေါါတဲ့ Digital Nautical Charts တွေ တနည်းအားဖြင့် DNC mapping တွေကို၊ အမေရိကန်စစ်သဘေ်ာတွေမှာ တတ်ဆင်အသုံးပြုကြပြီး၊ USS Guardian သောင်တင်ခြင်းဟာ၊ chart data မှ အချက်အလက် erroneous navigation အမှားတွေကြောင့်၊ ပေါါပေါက်ခဲ့ရတယ်လို့၊ ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးချက် preliminary findings တွေအရ၊ သိရပါတယ်။ chart data မှ အချက်အလက်တွေထဲမှာ၊ Tubbataha Reef ဆိုတဲ့ သန္တာကျောက်တန်း တည်နေရာကို လွဲမှားစွာဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ USS Guardian ဟာ၊ ရွှေမြန်မာ သဘေ်ာသားတို့ ပျော်စံရာစခန်းသာဆိုတဲ့၊ ပလဝန်း Palawan Island ကျွန်းရဲ့ အရေရှ့တောင်ဖက်၊ မိုင် (၈၀) အကွာမှာ သောင်တင်နေနတာဖြစ်ပြီး၊ U.S. 7th Fleet ဆိုတဲ့ အမေရိကန်အမှတ် (၇) ရေယာဉ်စုဟာ၊ သန္တာကျောက်တန်းမှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှု environmental effects အနည်းဆုံး အနေအထားဖြင့်၊ သဘေ်ာဆယ်ယူမှု salvage operations ကိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
Reference and Image credit to : Admiralty Charts, U.S. Pacific Fleet spokesman Capt. Darryn James On January 19, 2013.
Remark : All publications images herein this website are for use of educational purpose only. The owner of this web site is not responsible for the consequences in case of violation to copyright, trademark, patent or other intellectual property rights of any third party.
Posted by ကိုထွန်း at 02:05 No comments:
"မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်" ရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇအင်ဂျင်နီယာပညာ ဘာသာရပ်မှ၊ 'ငုတ်ဗီဇ' ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ၊ ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ post ကိုပြန်လည် ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
'ငုတ်ဗီဇ' ဆိုတဲ့ 'recessive gene' နဲ့ ပက်သက်ပြီး၊ မျိုးရိုးဗီဇအင်ဂျင်နီယာ genetic engineering ပညာရပ်နယ်ပယ်ဖက်မှမဟုတ်ပဲ၊ evolutionary biology ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုဇီဝဗေဒနဲ့ cognitive psychology သိခြင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပညာတို့ကို၊ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ လူမှုရေးသိပ္ပံ social science ပညာရပ်ခေါင်းစဉ်အောက်မှ၊ 'ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှု စိတ်ပညာ' ဆိုတဲ့ evolutionary psychology ပညာရပ်နယ်ပယ် အမြင်နဲ့ ဆွေးနွေး ကြည့်ပါဦးမယ်။ ရုပ်ကြွင်း fossils နဲ့ ဇီဝသက်ရှိ organic compounds ပညာရှင် palaeontologist တဦးဖြစ်သူ 'Stephen Jay Gould' ကတော့ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှု စိတ်ပညာဟာ၊ ထင်ကြေးနဲ့ ကောလ ဟာလတွေကို၊ မှန်မမှန် စစ်ဆေးခြင်းမရှိပဲ လိုရာဆွဲယူကာ လက်ခံထားတဲ့ ပညာရပ်ရယ်လို့၊ ပြောဖူးပါတယ်။ ဒီ post ကိုလည်း၊ လိုရာ ဆွဲယူပြီးရေးထားတဲ့ post အဖြစ်ယူဆကာ၊ ဖတ်ကြပါလို့ ကြိုတင်တောင်းပန်ပါရစေ။
မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ သန္ဓေပြောင်းခြင်း heredity and mutation တို့ကြောင့် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှု revolution ဖြစ်ပေါါလာရပါတယ်။ မျိုးစေ့ သို့မဟုတ် ဗီဇဆိုတဲ့ gene ဟာ၊ cell ထဲမှာရှိနေပြီး၊ ပုံစံတူစေရန် ညွှန်ကြားပေးတဲ့ အရာတခုဖြစ်ပါတယ်။ molecular unit ဖြစ်တဲ့ gene ဟာ မျိုးရိုးဗီဇ heredity ကို ဖြစ်ပေါါစေတဲ့ သက်ရှိဇီဝခန္စာအဖွဲ့အစည်း living organism လည်းဖြစ်ပါတယ်။ DNA လို့ခေါါတဲ့ gene ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အရ ဆဲလ် cell မှ ပရိုတိန်း protein တွေကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ gene ဟာ ဆံပင်အညို၊ ဆံပင်အနက်၊ မျက်လုံးအပြာ၊ မျက်လုံးအနက်၊ အသားအဖြူ၊ အသားအညိုနဲ့ အရပ်၊ အတို အရှည် အပါအဝင်၊ စိတ်နေစိတ်ထားတွေကို ညွှန်ကြားပေးတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။ သားသမီးတွေ မိဘနဲ့ တူရတာကတော့၊ မိဘထံမှ မျိုးစေ့ သို့မဟုတ် ဗီဇဆိုတဲ့ gene ကိုလက်ခံရရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ heredity ဆိုတဲ့ 'မျိုးရိုးဇာတိလက်ခံရရှိခြင်း' လည်းဖြစ်ပါတယ်။
မျိုးစေ့ကန်အတွင်း၊ တူညီတဲ့မျိုးစေ့တွေရှိနေပေမယ့် မျိုးစေ့ တခုတလေ သို့မဟုတ် အချို့ဟာ ကွဲပြား ခြားနားနေရာမှ၊ သန္ဓေပြောင်းခြင်း mutation ဖြစ်ပေါါလာရပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် cell တခုထဲ အတွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ မျိုးစေ့ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အရပ်ရှည်စေရန်ပြုလုပ်ပေးမယ့် မျိုးစေ့မှ၊ လက်ချောင်းတချောင်း ပိုထွက်လာစေရန် ပြုလုပ်ပေးလိုက်ခြင်းဟာ သန္ဓေပြောင်းခြင်းဖြစ်သလို၊ cell အသစ် ဖြစ်ပေါါလာခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သန္ဓေပြောင်းခြင်းအများစုဟာ အန္တရာယ် ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ သန္ဓေပြောင်းခြင်းမှပေါါပေါက်လာတဲ့ မျိုးစေ့အသစ်ဟာ ရှင်သန်မှုနဲ့ မျိုးပွားမှုကို အားမပေးလျှင် ကြာကြာမခံသလို၊ ရှင်သန်မှုနဲ့ မျိုးပွားမှုအားကောင်းတဲ့အခါ အခြားမျိုးစေ့တွေကိုပါ၊ ကူးစက်ပြန့်နှံ့သွားပြီး၊ မျိုးစေ့ကန်အတွင်းမှာ မျိုးစေ့အသစ်တွေကိုထပ်မံပေါါပေါက်စေပါတယ်။
သက်ရှိသတ္တဝါတွေမှာ မျိုးစေ့အသစ်တွေထပ်မံပေါါပြီး၊ cell အသစ်တွေပေါါပေါက်ရာမှတဆင့် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှု revolution ဖြစ်ပေါါလာရပါတယ်။ ဗြိတိသျှလူမျိုး evolutionary biologist ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှု ဇီဝဗေဒပညာရှင် ဝီလျှံဒေါါလ်နယ်ဟယ်လ်မင်တန် 'W.D Hamilton' က ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စဉ်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံဟာအဓိကမဟုတ်ပဲ၊ သက်ဆိုင်ရာမျိုးစေ့ကသာ အဓိက ကျတယ်လို့ (၁၉၆၄) ခုနှစ်လောက်တုန်းက၊ ပြောခဲ့ပါတယ်။ W.D Hamilton ရဲ့ Hamilton's rule နိယာမအကြောင်းကိုလည်း၊ ထည့်ပြောပါဦးမယ်။
ဆွေမျိုးနီးစပ်သူတွေမှာ၊ တူညီတဲ့မျိုးစေ့တွေရှိကြပြီး၊ သွေးသားတော်စပ်သူတွေကို ကူညီခြင်းဟာ တူညီတဲ့မျိုးစေ့တွေ အခြင်းခြင်း အညီပေးခြင်းဖြစ်သလို၊ မိမိရဲ့ ကိုယ်ပွားတွေကို ကူညီခြင်းဖြစ်တယ်လို့ 'ပါမောက္ခ Richard Dawkins' ကဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဆွေမျိုးတော်စပ်မှုပမာဏ coefficient of relatedness ကို 'r' ဆိုတဲ့ တိုင်းတာမှု ကိန်းနဲ့ တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန်လူမျိုး geneticist မျိုးရိုးဗီဇပညာရှင် 'Sewall Wright' က၊ coefficient of relatedness ကို ပထမဒီဂရီဆွေမျိုး၊ ဒုတိယဒီဂရီဆွေမျိုးနဲ့ တတိယဒီဂရီဆွေမျိုးဆိုပြီး၊ ပိုင်းခြားကာ၊ 'r' တန်ဘိုးကို တိုင်းတာပြခဲ့ပါတယ်။
ပထမဒီဂရီဆွေမျိုးအုပ်စုမှာ မိဘနဲ့ သားသမီးတို့ပါဝင်ပြီး၊ 'r' တန်ဖိုး အနေနဲ့ (၅၀) % ရှိပါတယ်။ ဒုတိယဒီဂရီဆွေမျိုးအုပ်စုမှာတော့ အဘိုး၊ အဘွား၊ ဘကြီး၊ ကြီးဒေါါ၊ ဦးလေး၊ အဒေါါ၊ တူ၊ တူမတို့ ပါဝင်ကာ၊ 'r' တန်ဖိုးအနေနဲ့ (၂၅) % ရှိပါတယ်။ တတိယဒီဂရီဆွေမျိုး အုပ်စုမှာတော့ တစ်ဝမ်းကွဲတွေ ပါဝင်ပြီး၊ 'r' တန်ဖိုးအနေနဲ့ (၁၂. ၅) % ရှိပါတယ်။ သွေးသားတော်စပ်သူတွေအခြင်းခြင်း၊ အပြန်အလှန်အကျိုးကို မမျှော်ကိုးပဲ၊ ကူညီစောင့်ရှောက်ခြင်း ဖြစ်ပေါါစေရန်၊ ဆွေမျိုးတော်စပ်မှုပမာဏ coefficient of relatedness 'r' ဟာ ကောင်းကျိုးတန်ဖိုးအချိုး cost - benefit ratio ဆိုတဲ့ c/bတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်ရမယ်လို့၊ "r > c/ b" ဆိုပြီး Hamilton's rule နိယာမကဆိုပါတယ်။
Reference and image credit to : ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း၊ အီဗော်လူးရှင်းစိတ်ပညာ၊ မုံရွေး စာအုပ်တိုက်၊ အောက်တိုဘာ၊ (၂၀၁၀) ခုနှစ်။ Pearson H (2006). "Genetics: what isagene?". Nature 441 (7092): 398–401,. The Evolution of Desire : Strategies of Human Mating, by David Buss, 1994., Gene
Posted by ကိုထွန်း at 20:55 No comments:
Dynamic Positioning System ဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းများ (၁)
ကျွန်တော်နဲ့ အတူ တစီးတည်း၊ စီးခဲ့ဖူးတဲ့ junior ညီငယ်တဦး၊ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က DP maintenance Course လာတက်ပါတယ်။ (၄) ရက် သင်တန်းကို၊ စက်ာပူဒေါါလာ ၆၀၀၀ သွင်းရပါသတဲ့။ မြန်မာပြည် မပြန်ခင် သင်တန်းမှ soft copy တွေကို၊ ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီထဲက တချို့တဝက်ကို တင်ပေးပါဦးမယ်။
ဒီစာအုပ်ကတော့ "Guide to Dynamic Positioning of Vessel" ဆိုတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှတဆင့် ရယူနိုင်ပါတယ်။
ဒီစာအုပ် ကတော့ "Latitude & Longitude for D.P System Users and Marine Engineers" ဆိုတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှတဆင့် ရယူနိုင်ပါတယ်။
Dynamic Positioning System တတ်ဆင်သုံးစွဲထားတဲ့ သဘေ်ာတွေအတွက်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအဖွဲ့မှ၊ ပြဌာန်းချက်
guide lines ဆိုတဲ့ MSC/ Circ. 645 ကိုတော့ ဒီနေရာမှတဆင့် ရယူနိုင်ပါတယ်။
Credit to : Aung Kyaw Soe
Posted by ကိုထွန်း at 01:58 No comments:
Hydraulic control valves (၅)
pilot-operated with external drain type check valve လို့ခေါါတဲ့ 'sequence valve' အကြောင်းကို၊ ဆက်ပါဦးမယ်။ fluid power circuits လို့ခေါါတဲ့ hydraulic circuits တွေမှာ၊ operation, efficiency နဲ့ performance တွေကောင်းလာစေဖို့အပြင်၊ safety အတွက်ပါ ရည်ရွယ်ပြီး၊ sequence valves တွေကို၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။ sequence vales တွေဟာ normally closed အနေအထားဖြင့် 'ပိတ်' နေသလို၊ fluid ဟာ bidirectional flow ဖြင့်၊ valve အား ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနိုင်ပြီး၊ bypass check valve တလုံးနဲ့အပြိုင် parallel တွဲဖက်တတ်ဆင်အသုံးပြုရတဲ့၊ valves တွေဖြစ်ပါတယ်။ sequence valves တွေမှာ hydraulic tank ဖြင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့ external drain line ပါဝင်ပါတယ်။
(၂) ခုထက်ပိုတဲ့ hydraulic cylinders တွေကို၊ parallel အနေနဲ့ မောင်းနှင်အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ အစီအစဉ် တကျ sequence အနေနဲ့ လှုပ်လျှားရွှေ့လျှားစေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ directional control valves, limit switches တွေနဲ့ limit valves တွေကို၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုပြီး၊ first cylinder ဟာ၊ လိုအပ်တဲ့ positive location ကိုမရောက်ခင်၊ second cylinder စတင် ရွှေ့လျှားစေဖို့၊ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရာမှ၊ sequence valves တွေကို cylinder actuation အတွက် အစားးထိုးတတ်ဆင်ပြီး၊ အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ bypass check valve တလုံးနဲ့အပြိုင် parallel တွဲဖက်ထားတဲ့ sequence valve ကို၊ directional valve ဖြင့်၊ တိုက်ရိုက် series အနေအထားဖြင့် တတ်ဆင်အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
Fig. Simplified cutaway ofatypical hydraulic sequence valve and schematic symbol
sequence valves တွေကို preset pressure ဖြင့် setting ချိန်ညှိထားပါတယ်။ fluid pressure ဟာ preset pressure မရောက်ခင်မှာ valve ပွင့်သွားပြီး၊ flow အားဖြတ်သန်း စီးဆင်းစေသသို၊ လိုအပ်ပါက flow direction ကိုပါပြောင်းလဲ စီးဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။ အထက်မှာ အသုံးများတဲ့ direct acting - internally pilot operated sequence valve တလုံးကို၊ နမူနာအဖြစ် ဖော်ပြထားပါတယ်။ internally pilot operated sequence valves တွေကို၊ အများဆုံး set pressure အနေနဲ့ 50 psi ပမာဏထက်မပိုပဲ၊ ချိန်ညှိထားလေ့ ရှိပါတယ်။ internally piloted designed အဖြစ် တည်ဆောက်ထားပေမယ့်၊ လိုအပ်ပါက externally piloted အဖြစ်ပြောင်းလဲ တတ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ direct acting - externally pilot operated sequence valves တွေမှာ set pressure ကို 100 ~ 150 psi ပမာဏခန့်မှာ၊ ချိန်ညှိ ထားပေမယ့် premature cylinder creep ဆိုတဲ့ hydraulic cylinder တဖြည်းဖြည်း ညင်သာစွာ စတင်ရွှေ့လျှားစေဖို့၊ below set pressure မှာ၊ valve ဟာ partially open အနေအထားဖြင့်၊ အနည်းငယ် စတင် 'ပွင့်' တာတွေ့ရပါတယ်။
မူလအခြေအနေမှာ၊ spring မှ adjustable force ရဲ့ တွန်းအားဖြင့် balanced spool ဟာ sequence valve inlet သို့ fluid စီးဆင်း မဝင်ရောက်စေရန်၊ block အနေနဲ့ တားဆီး ထားပါတယ်။ valve inlet မှ fluid ရဲ့ pressure ဟာ spring force setting ကိုကျော်လွန်သွားတဲ့အခါ၊ spool အား အပေါါသို့ တွန်းတင်လိုက်ပါတယ်။ fluid ဟာ routing fluid အနေနဲ့ စီးဝင်လာပေမယ့်၊ outlet ဟာ valve အတွင်းမှ fluid pressure မြင့်တက် မလာမခြင်း 'ပိတ်' နေပါတယ်။ inlet မှ fluid pressure ဟာ set pressure ရဲ့အောက်သို့ လုံးဝကျဆင်းမှု မရှိတဲ့ အခြေအနေရောက်မှာသာ၊ outlet စတင် 'ပွင့်' သွားပြီး၊ fluid flow ဆက်လက် စီးဆင်းသွားပါတော့တယ်။ outlet pressure ဟာ exceeds set pressure အဖြစ် ရရှိလာတဲ့အခါ၊ valve ဟာ fully open အနေအထားဖြင့် အပြည့်အဝ 'ပွင့်' သွားပြီး၊ valve ရဲ့ အဝင်နဲ့ အထွက် inlet and outlet မှ fluid flow pressure ကို equalized အနေနဲ့ ညီမျှနေစေရန်၊ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
Fig. Typical hydraulic circuit using conventional sequence valves for sequential operation of cylinders
အထက်မှာ work piece ကို clamp and hold အနေနဲ့ ကိုင်တွယ်ပြီး၊ second operation အဖြစ် လွှဲပြောင်းပေးမယ့်၊ machine တခုရဲ့ hydraulic circuit ကို၊ နမူနာအဖြစ် ဖော်ပြထား ပါတယ်။ sequence valve '2' ကို preset pressure အနေနဲ့ 500 psi မှာချိန်ညှိထားတဲ့အတွက်၊ cylinder '1' မှာအနည်းဆုံး 550 psi ဖိအားပမာဏရှိမှသာ၊ cylinder '2' ဟာ extend အနေနဲ့ အပြင်သို့ ဆန့်ထွက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ cylinder '2' ဟာ အပြင်သို့ extending အနေနဲ့ ဆန့်ထွက်ရွှေ့လျှားစဉ်၊ circuit အတွင်းမှ pressure ဟာ 500 psi ဖိအား ပမာဏအောက်သို့ ကျဆင်းမသွားရန် လိုအပ်ပါတယ်။ အကယ်၍ cylinder '2' ဟာ 1000 psi ဖိအားပမာဏလိုအပ်ပါက၊ relief valve setting မှတဆင့် increase အနေနဲ့ မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
cylinder '2' ဟာ retracted အနေနဲ့ အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ရွှေ့လျှားစဉ်၊ cylinder '1' သို့ retracted signal မဝင်ရောက်စေရန်၊ sequence valve '1' ကို preset pressure အနေနဲ့ 450 psi မှာချိန်ညှိကာ၊ block အဖြစ် တားဆီးပေးထားပါတယ်။ cylinder '2' ဟာ retracted အနေနဲ့ အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ရွှေ့လျှားစဉ်၊ pilot-operated check valve မှ cylinder '1' ရဲ့ force ကို ထိန်းသိမ်းပေးထား ပါတယ်။ sequence valve '1' နဲ့ cylinder '1' တို့ရဲ့ line မှဝင်ရောက်လာမယ့် signal မှသာ၊ pilot-operated check valve ကို open position ဖြင့် ဖွင့်နိုင်တဲ့အတွက်၊ အနှောက်အယှက်ပေးမယ့် မည်သည့် signal မှမရှိတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်ပေါါနေပြီး၊ cylinder '2' ဟာ fully retraced အနေနဲ့ အဆုံးထိ ဝင်ရောက်ရွှေ့လျှားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ cylinder '1' ဟာ load contacting တနည်းအားဖြင့် stroke end သို့ရောက်ရှိစဉ်၊ သို့မဟုတ် cylinder '2' ဟာ prematurely အနေနဲ့ ချောမွှေ့စွာအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ build-up pressure ပေါါပေါက်နိုင်တဲ့ အတွက်၊ အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ circuit ကို၊ safe အနေနဲ့ စိတ်ချ ယုံကြည်စွာ၊ အသုံးမပြုနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပထမဆုံးရွှေ့လျှားမယ့် cylinder '2' ဟာ၊ subsequent ones အနေနဲ့ နောက်ထပ် လိုက်ပါရွှေ့လျှားမယ့် cylinder '1' ထက် higher pressure ပိုမို လိုအပ်တဲ့အတွက်၊ sequence valves တွေမှာ အဆက်မပြတ် substantial heat တွေပေါါပေါက်နိုင်တဲ့ အပြင်၊ valve ရဲ့ အဝင်နဲ့ အထွက်မှာလည်း၊ မြင့်မားတဲ့ high pressure drop တွေ ဖြစ်ပေါါနိုင်ပါတယ်။
Fig. Simplified cutaway ofakick-down sequence valve and schematic symbol
sequence valves တွေမှာ ဖြစ်ပေါါလာမယ့် substantial heat တွေနဲ့ high pressure drop ကို၊ တားဆီး ကာကွယ်ရန် conventional sequence valves တွေအစား၊ kick-down sequence valves တွေကို၊ hydraulic circuits တွေမှာ တတ်ဆင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ kick-down sequence valves တွေမှာ spring force နဲ့ပိတ်နေမယ့် adjustable poppet ပါဝင်ပါတယ်။ pressurized fluid ဟာ valve ရဲ့ inlet မှတဆင့် control orifice ကိုဖြတ်ပြီး၊ main poppet သို့ ဝင်ရောက်စီးဆင်းပါတယ်။ main poppet up ကို pressurized fluid မှ တွန်းပေမယ့်၊ opposite side မှ light spring ရဲ့force နဲ့ equal pressure အဖြစ်၊ ညီမျှနေစဉ် valve ဟာ 'ပိတ်' နေပါတယ်။
fluid ဟာ adjustable poppet ကို 'ပွင့်'သွားစေမယ့် ဖိအားပမာဏ pressure built-up အခြေအနေ အထိ ရောက်ရှိလာတဲ့အခါ၊ valve ရဲ့ inlet မှတဆင့် control orifice ကိုဖြတ်ပြီး စီးဆင်းခဲ့တဲ့ နှုံးထက်၊ ပိုမြန်မယ့် flow rate တခုဖြင့်၊ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းပါတယ်။ flow rate ကြောင့် pressure imbalance ဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ main poppet လည်း၊ အပေါါသို့ 'ကြွ' တက်လာပါတယ်။ main poppet ဟာ အပေါါသို့ route trapped အနေနဲ့ လုံလုံလောက်လောက် 'ကြွ' တက်သွားစဉ်မှာတော့၊ bypass orifice ကိုဖြတ်ပြီး၊ fluid စီးဆင်းပါတယ်။ bypass orifice ရဲ့အရွယ်အစားဟာ၊ control orifice ရဲ့ အရွယ်အစားထက်၊ ပိုမို ကြီးမားတဲ့အတွက်၊ main poppet ရဲ့အထက်မှာ pressure ကျဆင်းသွားပါတယ်။ spring force နဲ့ outlet port မှ back-pressure တို့မှသာ main poppet ကို ပိတ်စေနိုင်ပါတယ်။ pressure ဟာ valve ရဲ့ အဝင်နဲ့ အထွက်မှ၊ pressure ဟာ equalized အနေနဲ့ ညီမျှသွားစဉ်မှာတော့၊ fluid ရဲ့ flow လည်းရပ်တန့်သွားပြီး၊ spring force ဖြင့် main poppet ကို ပိတ်လိုက်ပါတယ်။
ဖော်ပြထားတဲ့ circuit ဟာ၊ အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ work piece ကို lamp and hold အနေနဲ့ ကိုင်တွယ်ပြီး၊ second operation အဖြစ်၊ လွှဲပြောင်းပေးမယ့်၊ machine တခုရဲ့ hydraulic circuit နဲ့ အတူတူဖြစ်ပြီး၊ conventional sequence valves တွေအစား၊ kick-down sequence valves တွေကို၊ အသုံးပြုထားတဲ့ circuit လည်းဖြစ်ပါတယ်။ cylinder '1' မှာ ဖိအားပမာဏ 750 psi မရရှိ မခြင်း၊ cylinder '2' လည်း ရပ်တန့်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ preset setting သို့ရောက်ရှိပြီး၊ kick-down sequence valve ပွင့်သွားတာနဲ့ fluid ရဲ့ ဖိအားပမာဏ pressure ဟာ၊ မူလထက် 50 psi ခန့် ဖိအားပမာဏ ထပ်တိုးသွားသလို၊ overcome resistance အနေနဲ့ system အား၊ ထိန်းညှိပေးထားနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။
Reference and image credit to : http://hydraulicspneumatics.com/, Are You Taking Advantage of Sequence Valves ? By Bud Trinkel - Fluid Power Consultant, Oct. 8, 2008.
Posted by ကိုထွန်း at 03:30 No comments:
Electronic Chart Display and Information Systemြေ...
မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ သန္ဓေပြောင်းခြင်း heredity and muta...
Dynamic Positioning System ဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းမျာ...